September 20, 2021 Xuseen 6
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyagoona ka arrinsaday shirkii dhowaan maamulada dalku ku baaqeen.
Tan iyo markii uu Madaxweynaha Galmudug bilaabay dadaaladii waan waanta ee laga dhex waday Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble, iyadoo xilligaas loo arkayay in aanu dhexdhexaad ahayn oo uu dhinac la safnaa.
Ra’iisul wasaare Rooble ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu diidey inuu taageero kulankii Madaxda maamulada dalku ay iclaamiyeen in lagu qaban doono magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland.
Dhinacyo kala duwan oo isugu jiray siyaasiyiin iyo dad kale ayaa ku dhaliilayay Maadaxweyne Qoorqoor inaanu doorkiisii saxda ahaa qaadanin, laakiin hada sida muuqata howshaas ay ka heshiiyeen isaga iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Dalka Soomaaliya sidan ayaa la iskugu haaysataa!
Ingiriis, Kenya, Emirates iyo Jabuuti waa hal dhinac, (Tools) Rooble, Deni, Axmed Madoobe iyo Culusoow oo hoggaaminminaya Mucaaradka Hawiye!
Turkiga, Qadar, Etiopia iyo Dowlado qarsoon, (Tools) Farmaajo, Fahad Yaasiin, K. Galbeed, G. Mursal!
Danta kooxda Ingiriis hor boodayo. U xaglinta Kenya ee arrimaha muranka badda uu shidaalka ceegaayo iyo ka ceeyrinta Turkiga iyo Qadar ee Soomaaliya. Taas oo uu nuxurka ugu dambeeyo yahay, Aw Ingiriis in uu Khayraadkaasi ku dhaco magaca Kenya, laakiin uu cadka ugu weyn isgu qaato!
Danta qolooyinkan Soomaalida ah ee dhex boodaya xulufada Aw Ingiriis! Ma jirto Dan guud oo mideeyso, aanan ka ahayn in Farmaajo iyo Fahadkiisa meesha laga saaro!
Danta Qolooyinka Turkiga hor booday! Adkenta danta Turkiga uu Soomaaliya ka leeyahay oo uu Khayraadkeeda kow ka yahay iyo taageerida ciddii loo arko in arrintaasi lagu gaari karo ee Soomaali ah iyo la ficiltanka Emirates!
Danta Qolooyinka Soomaalida ee arrintaasi dhex booday! Ku haynta Fahad iyo Farmaajo meesha, iyo xulufeeysiga cid kasta oo ku gacansiin karta arrintaasi!
Danta Soomaaliya iyo wixii laga rabay dadka u nasab sheeganayo ee u eg in aay siyaasadeeda horboodayaan! Ka hormarinta danta Soomaaliya, tan dalalka shisheeye iyo danta shaqsiga ka dhex raadinta danta Soomaaliya, (not) tan dalalka shisheeye!
Isu ekaanta arrintii QALBI DHAGAX iyo tan IKRAAN TAHLIIL iyo ku lug lahaanshiyaha SANBALOOLSHE iyo DAMUL JADIID labada arrimoodba waa arrin kale oo taxliil u baahan markeeda, laakiin waxtiga ayaan u dhaafay!!!
BROTHER Somalia 🇸🇴 is cursed in 1884 by European imperialism in Berlin Germany 🇩🇪. Our grandfathers tried and lost 1.2 million in 1920s. I don’t know if you remember Somali militry tried again in 1977 and lost in one week 6000 Somali soldiers killed by fucking Russia 🇷🇺 or Soviet Union and Cuba 🇨🇺 “Naasdheer” After that Somalia 🇸🇴 fragmented and than civil war boom. HUTU HAWIYE Started ethnic cleansing for Darood clan and basically Slaughtered whole Somali people in southern and central Somalia. That’s a brief history
Maxaa dhacay last ten years markii dalku burbaray oo dowladihii dariska ahaa dalka dowladnimadedii lala aaday oo Somali dhexdeeda ilaa hada heshiin ayaa waxaa dhacay Abaaro abuuray Qaxooti in southern Somalia 🇸🇴 piracy iyo argaxiso caalami ah. Markaas waxaa prime minstero ka ahaa Uk 🇬🇧 iyo Turkey 🇹🇷 David Cameron iyo Erdogan. Labadaas hogaamiye Somalia abaal looga hayaa midna Siyaasad ahaan buu garab istaagay midna waaba yimid Somalia 🇸🇴 oo Erdogan Mogadishu waa Yuu yimid. Marka labadaas dowladood danaha ay ka leeyihiin waa in loo fuliyo mid dhaqaale noocay doonta ha ahaatee teeda kale Uk 🇬🇧 maka fileyno 4th historical mistake this time waayo dhibka Somali haysta iyakaba wuu heystaa oo inkaarteenii baa ku dhacday look the map of United Kingdom 🇬🇧 Ireland 🇮🇪 Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Northern Ireland marka sina ogama fileyno 4th historical mistake inuu Somali ka galo Somalida Europe joogta badidoodu waxay joogaan uk 🇬🇧. Hada dunidii way isbelin oo “GEO POLITICS” kii baa isbedelay US and uk 🇬🇧 both dad baan ku leenahay maanta and whole of Europe. Marka dowladahan Kenya 🇰🇪 iyo Ethiopia 🇪🇹 waqtigoodii naas nuujinta is over taas waxay kuu cadeyneysaa UN Security Council yesterday Uk 🇬🇧 Kenyan ka xun cagaha dhigo bay ku dheheen Somalia 🇸🇴 is more important than Kenya now because of the prime location Red Sea and Indian Ocean and they know now China 🇨🇳 the elephant 🐘 is the house Game over.
Dowlahan yar yar ee Arabs they’re just stupid oil is not going to be needed soon technology is booming and the ports war is up. Tusaale waxaa kuugu filan Emarates port jabal Cali 5 years ago was one of the busiest ports in the world now look half-full why “CHINA IS BUILDING GWADER PORT IN PAKISTAN AND THE BELT AND ROAD INITIATIVE” waana tii laga eryey Doraleh port in Djibouti 🇩🇯 waa iyakii u duulay inay Berbera inay kula challenge gareeyaan Djibouti 🇩🇯 bossaso sana boos celis isku dayaya. Farmajo wuu ogyahay lakiin dhagoolkan ROOBLE waxba Kama oga Kenya 🇰🇪 Buu isku tuuray Emarates oo Egypt adeegsanaya baa Cairo looga yeeray he doesn’t understand meesha xarigu ka xiran yahay hade ogsoonow Turkey 🇹🇷 iyo Qatar 🇶🇦 waa u jeedaan miskiin kan cambaarta leh ee ROOBLE. Waa nin habar gidir ah Somali Kama fileyso inuu wax fahmayo inay wax qaribaan mooyaane oo waa kaas criminal ka Ina adeerkii Ina Cabdi shukuur shukaan saday iyo dhurwaayada Qabuuraha Mogadishu Maskiin fiwqul miskin. Hadey heshiiyaan Qoor Qoor sow laba nin oo Habar gidir ah ma’ahan sow Farmajo na isla Reer Galmudug ma’ahan? Shaqdiisu sow ma’aheyn inuu dalka doorasho deg ah geliyo hada wax karaamo ah ma leh adeerkiisna waa mujrimka Hassan Daahir aweys saas ma ogtahay?
Hada waxaa la sheegayaa inuu warqad u qoray wasaarada maaliyada oo yiri lacagtii Airport ka Mogadishu lagu qabtay ee Emarates iigu shuba acount secret ah BISINKA TUUG WAA TUUG
WAAQ WAAQ IKRAM CASE KEEDA CADAALAD HA HESHO WAAQ WAAQ FAHAD FAHAD WAR NAGA JOOJIYA DJIBOUTI 🇩🇯 MASAAKIIN MEEL WAX KA JIRAAN MA OGA EMARATES INAY DHEXDA KAGA JIRTO MAY OGA WAA GARTOOD FARMAJO BAA THREAT KU WADA AH KENYA 🇰🇪 ETHIOPIA 🇪🇹 UGANDA 🇺🇬 DJIBOUTI 🇩🇯 WAAYO WAXAA JOOGSANAYA MASHRUUCAN SHAATIGA SHAYDAAN KA EE ADEER KIIS BILAABAY 1993 MUJRIM KA HABAR GIDIR EE HASSAN DAAHIR AWEYS MARKII SHAATIGA SHAYDAAN KA ISAAQ U GESHAY ISAGOO HUBEYSANA BOSSASO SOO DHEX ISTAAJIYEEN.
Qoor qoor iyo Rooble si beel ahaan ah baa la isugu keenyay. Dhagartii Garoowe eey baa cunay.
Wasiirkii amniga ee xilka uu ka qaaday Ra’isul Wasaare Rooble ayaa kashifay xogo xasaasi ah oo ku saabsan qorsheyaal aan caadi aheyn.
Hoos ka akhriso qoraalka Xundubey:
Ka dib: markii aan dareemay in dawladda Soomaaliya ay dhaqaala la’aan xoogani hayso, ayaan Rooble u tegay. Waxa aan ku iri: walaalow, dhaqaala la’aantaan kuma sii jiri karnee, aan Wadamada Carabta ee afartii sano ee la soo dhaafay aan wax dhaqaala ah oo muuqda na siin, aan albaabadooda garaacno! Carabtiina waa taas heshiisay oo arimihii Gacanka Carabtu waa iska dhamaadeene, yaanan kaligeen meel cidla ah iska fadhine!
Waxa uu igu yiri: waa yahaye, ka soo shaqeey. Waxa aan go’aansaday in aan Masar ka bilaabo. Waxa aan la hadlay rag furayaasha Masar in ay haayaan aan ogaay. Arinkii Masar waa laga soo shaqeeyay. Waana lagu guuleestay. Markii uu arinkii bislaaday, asaga ayaa toos ula xariiray oo waa na dhinac maray, hawshiina waxa uu u dhiibtay DAD ay isku JUFA yihiin!
Markii aan ogaaday AF-GEMBIGAAS, waan u tegay Rooble. Waxa aan ku iri: waaba arkaa dhaqankaaga, ee maxaad Masar ula tegi rabtaa? Waxa uu ii sheegay waxyaaba yaryar oo aan i qancin! Waxa aan ku iri: walaalow, dal walba waxa uu leeyahay dad fura oo ay xantamaan, kuna kalsoonyihiin, ee maad qof iyo laba ka wadatid dadka Masar fura, arinkana horay u soo bisleeyay? Waa uu diiday. Waxa aan mar dambe xog ku helay in markii uu Masar tegay lagu yiri: waxa aad rabto ma taqaanide, marka dambe noo imaaw adiga oo yaqaana waxa aad rabto!
Asaguna marna nalama wadaagin wixii uu socdaalkaas iyo kuwii kale ee faraha badnaa uu kala soo kulmay!
Markii uu fashiliyay arinkii Masar, waxa aan sii wadnay arinkii Imaaraatka, anaga oo reja ka qabna in uu is garan doono. Sidii hore oo kale waxa aan ku guulaysanay in aan xariirkii Imaaraadka soo celino. Laba jeer ayuu Rooble la kulmay Danjiraha Imaaraadka Soomaaliya u fadhiya. Wasaaradda Arimaha Dibadda Soomaaliyana waa joogtay fadhiyadaas. Waxa aan ka codsanay Imaaraadka, in ay dhaqaale ugu deeqaan Dawladda Soomaaliya, waana ogolaadeen, wax SHURUUD ah oo ay nagu xireena ma jirin, oo aan ka ahayn in aan RAALI-GELIN ka bixino arimihii lacagta ee horay looga xayiray.
Markii hawshii leesku afgartay waxaa leesku raacay in aan anugu tago Imaaraadka oo aan gogol xaar u sii sameeyo, asaguna uu yimaado.
Habeenkii talaadada ee 07/09/21, ayaan aniga iyo Rooble balanay oo uu ila dardaarmay.
Hayeeshee, Rooble wuxa uu mar kale go’aansaday in uu AF-GEMBI kale sameeyo oo uu arinka u dhiibto Dad JUFADIISA ah, anigana uu DHABAR-JEBIN igu sameeyo.
Maalintii Arbacada ee 08/09/21, waa maalin kadib uun, markii uu ila dardaarmay, ayuu qaatay go’aan sharci dara ah oo uu leeyahay xiliki waa ka qaaday!
Waxa aan isku dayay dhowr jeer in aan la xariiro oo aan waydiiyo sida ay wax u jiraan? Marnaba Taleefan igama qaban, ilaa haddana isma maqal, hadii laga reebo dad waxgarad ah oo uu ii soo diray oo uu ku yiri: Xundubey igala hadla ee qoraalada ha joojiyo!
Intaa kadib: DADKII ay isku Jufada ahaayeen ayuu u diray Imaaraadka, si ay arinkii ula wareegaan!
Ma aqaano halka arinkaasi ku dambeeyay! Asaga – waa Rooblee – ayaa laga rabaa halka uu arinkaasi ku dambeeyay!
Sida lawada ogyahayna XOGAHA socdaaladiisa oo dhan cid JUFADIISA ka baxsan lama wadaago!
Sida wax u dhaceen oo kooban waa sidaas.
Marka aad fiirisid habdhaqanka iyo marxaladaha ka jira somaaliya aad bey u adagtahay in uu shaqsi noqdo dhexdhexaad. Aad bey u adagtahay in uu shaqsi nogdo wadani umadu u siman tahay.